apple airpods pro 2 zuva rekuburitsa, mutengo, maficha uye nhau
Kuru Nhau & Ongororo Apple AirPods Pro 2 zuva rekuburitsa, mutengo, maficha uye nhau
Apple AirPods Pro 2 zuva rekuburitsa, mutengo, maficha uye nhau
Apple AirPods Pro kubva 2019Ichi chinyorwa chichagara chichigadziriswa kana kutsva kutsva uye runyerekupe zvioneka.
Isu takamirira mutsivi weAirPods Pro kubvira gore rapfuura pakauya mushumo kubva DigiTimes akataura kuti tanga tichienda kunoona iyo AirPods Pro 2 uye iyo AirPods Lite pamberi pekupera kwa2020. Zvakanaka, izvo hazvina kuitika; zvisinei, Apple ichiri kupa vateveri vayo veAirPods mahedhifoni matsva nekusunungurwa kwe AirPods Max , pamusoro-pe-nzeve seti yakauya nemutengo weprimiyamu.
Zvino, mishumo yakati wandei inotitungamira kuti titende kuti Apple iri kushanda kuburitsa AirPods Pro 2 muna 2021, ichipa vatengi vayo shanduro yakagadziridzwa yeanotengesa AirPods Pro. Hezvino zvese zvatakanzwa nezve AirPods Pro 2 kubva kune runyerekupe uye kudonha kusvika parizvino, kuti iwe uve neruzivo rwekuti chii chaunotarisira kana Apple yafumura iyo AirPods Pro 2.
Apple AirPods Pro 2 zuva rekuburitsa
Apple AirPods Pro 2 mutengo
Apple AirPods Pro 2 dhizaini
Apple AirPods Pro 2 maficha
Apple AirPods Pro 2 hupenyu hwebhatiri
Apple iPhone 13 zuva rekuburitsa, mutengo, maficha uye nhau
Apple AirPods Pro Lite zuva rekuburitsa, mutengo, maficha uye nhau
H1 2021 (runyerekupe) kana Q4 2021 - Q1 2022 (runyerekupe)
Runyerekupe haruna kubvumirana zuva rinoburitswa reAirPods Pro 2, uye tiri kuona zvinopesana neruzivo. Kubva ikozvino, a Chirevo cheBloomberg inotarisa pane H1 ye2021 inogoneka kuburitsa nguva furemu, nepo ichizivikanwa muongorori weindasitiri Ming-Chi Kuo inoti mamiriro angangoitika ndeekupedzisira, Q4 2021 kuburitsirwa iyo AirPods Pro 2.
Pamusoro peizvozvo, nyowani DigiTimes mushumo (kuburikidza MacWorld ) inoti Apple yakaisa maodha eAirPod neWinbond Electronics, uye iyo mishumo inoti Winbond Electronics iri pakati pevanopa zvikamu zvezvizvarwa zvinotevera zveAirPods Pro.
Parizvino, izvi ndizvo zviitiko zviviri: angave Apple anozivisa uye oburitsa AirPods Pro 2 munguva pfupi, kana kuti tichavaona pedyo nekupera kwegore.
Pakutanga, paive nekusuwa kwakashata Jon Prosser zvakamutorera tsiye dzake : akaudzwa kuti 23 Kurume raive zuva reiyo inotevera Apple chiitiko, uye izvo hazvina kuitika & apos;
ChiJapan blog blog MacOtakara yakataura kare kuti iyo AirPods Pro 2-nd chizvarwa chingangotangisa muna Kubvumbi. Izvo zvaratidzawo kuti hazvina kunaka kubva parizvino.
Around $ 250 (Inotarisirwa)
Iyo yekutanga AirPods Pro yakatangwa ne $ 249, nepo Apple ichipa iyo yekupinda-chikamu AirPods zvishoma, nechinangwa chekuvhara bhajeti-inoshamwaridzika uye misika yepamberi yemakutu.
Ino nguva, isu tinotarisira kuti Apple iende nemutengo mumwe chete wekukomberedza $ 250 yechizvarwa chechipiri cheAirPods Pro, kana kuti pamwe ingangoenda padhuze zvichienderana nekuvandudzwa kuchaitwa neAirPods Pro nyowani. Kazhinji, iyo AirPods Pro 2 inotarisirwa (uye izvi zvakasimbiswa nedzimwe runyerekupe) kuita madhora mazana maviri nemakumi mashanu.
Yakanakisa AirPods uye AirPods Pro madhiri pari zvino
Parizvino Apple AirPods Pro uye yekupinda-chikamu AirPods Pave paine dzimwe runyerekupe dzinoti iyo AirPods Pro 2 ichauya mune yakawanda compact dhizaini. Dhipatimendi rekugadzira inzvimbo imwe yatiri parizvino yakawanda yekufungidzira uye nerunyerekupe, mamwe acho akafuridzirwa neakawanda Apple patent kunyorera.
Kutanga kubva, isu tine Bloomberg chirevo chinotaura kuti panguva ino, Apple ichaenda kune chimwe chinhu chakasiyana neyakajairwa: dhizaini inoyeuchidza iyo yeGlobal Buds. Samsung & apos; s earbuds mutambo kunyatso kuoneka. Samsung kunyange ine modhi, iyo Samsung Galaxy Buds Live, iyo mitambo iri fomu yakaita bhinzi. Sekureva kwaBloomberg, Apple inogona kuyedza kubvisa dzinde rinonamira kubva munzeve imwe neimwe neinotevera iteration yeAirPods Pro. Zvisinei, makuhwa apfuura taura kuti Apple inogona kusakwanisa kuita izvo zvichipiwa iyo chokwadi iyo stem inochengetera chip yeyeearbuds, uye kudzima ruzha.
Dzimwe runyerekupe zvakare dzinoti Apple inogona kuenda kune imwe compact dhizaini, asi munzira ipi inoramba ichionekwa. Patent inotaura kuti mahedhifoni anogona kuuya neimwe nzira yeMagSafe rutsigiro, asi zvimwe pane izvo gare gare.
Parizvino, hapana ruzivo rwakawanda rwuripo pane yekuchaja kesi yeAirPods Pro 2. zvine musoro kutarisira kuti ichabvumidza kuchaja isina waya senge yekutanga-gen AirPods Pro. A patent yakaonekwa naPatentlyApple inoratidza hinge yakachengetedzeka yekuvharwa kweAirPods Pro, iyo yatingaone mune yechipiri-gen AirPods Pro. Nekudaro, panguva ino, iyo info haina kusimbiswa, uye sezvaungave ungangoziva, patent hazvireve kuti zvinoreva kuti chigadzirwa chichagadzirwa kana chimiro chichaitwa. 9to5Mac inoshuma iyo kesi yekuchaja yeAirPods Pro 2 inogona kunge iri diki zvishoma, pa 46mm kureba uye 54mm yakafara, nepo, kuitira chirevo, yazvino AirPods Pro yekuchaja kesi iri 45.2mm kureba uye 60.6mm yakafara.
Izvo zvakare kuziva kuti Apple ichaunza smart kesi yeAirPods Pro, senge iyo inoisa iyo AirPods Max mune yakaderera-simba nyika . Parizvino, hapana kuvuza kana runyerekupe pamusoro peizvi zvati zvasangana zvakadaro.
Sezvo TomsGuide inotaura nemazvo, runyerekupe uye kudonha kwatinonzwa mazuva ano kune chekuita neAirPods yechitatu-gen kana yechitatu iteration yeanopinda-chikamu AirPods. Nekudaro, zvakawanda zvezvinhu zvine runyerekupe izvo izvo AirPods 3 zvinogona mutambo zvinogona kupedzisira zvave muAirPods Pro 2 futi, kunyanya tichifunga kuti maProsesa ari akawanda eprimiyamu earbuds misiyano isingafanirwe & apos; haina yekupinda-chikamu maficha.
Yakagadziriswa ruzha kukanzurwa uye yepamusoro Transparency maitiro pane iyo AirPods Pro 2
Chekutanga, tine makuhwa pamusoro pekuvandudzwa kweANC (Active Noise Cancellation) paAirPods Pro 2. Iyo chaiyo nzira iyo ichavandudzwa inoramba iri chakavanzika kubva parizvino. Iyo AirPods Pro 2 inotarisirwa kuratidzira yakanyatsojeka Transparency maitiro zvakare, izvo zvinogona kunzi zvinokuyambira nezve njodzi dzinouya nekudzikisa kana kucheka ruzha. Kunyangwe ichi chiri runyerekupe rweanopinda-chikamu cheAirPods 3, zvine musoro kutarisira kuti chinhu chinobatsira kuvepo paAirPods Pro 2 futi.
Iyo AirPods Pro 2 inogona zvakare kuuya neyechitatu-bato app rutsigiro uye pamwe pfupa conduction tekinoroji. Iyo yekupedzisira yakangoonekwa mune patent application neApple uye anogona kana kuti asingauye kuAirPods Pro 2. Tekinoroji yekufambisa bhonzo inonyanya kubvumira mahedhifoni kutumira masaini kuburikidza nemapfupa edehenya rako, pasina hazvo kuendesa mimhanzi kuburikidza nemhepo (semuenzaniso, paunoshambira, kufambisa mweya hakuna basa, asi nekutakurwa kwemabhonzo, iwe waigona kuteerera mimhanzi pasi pemvura).
Zvimwe zvinhu zvinofungidzirwa kuti zviitwe paAirPods Pro 2 zvinoenderana nazvo AirTags (Mhinduro yaApple kuna Tile uye Galaxy SmartTag ), otomatiki switching, Dolby Atmos tsigiro.
AirPods Pro 2 mumhepo-chiratidzo, MagSafe rutsigiro
Aya maviri anokwanisa AirPods Pro 2 maficha anotarisirwa kunyanya zvichienderana nemvumo yakapihwa neApple. Ehezve, sekune chero patent, kuisa mukati mawo pachako hakusi vimbiso yechinhu chakasimbiswa, saka tora izvi negorosi remunyu.
Pamusoro pezvo, pane & apos; patent inoratidza kuti mushandisi anogona kukwanisa kudzora iyo AirPods ne-in-mhepo zviratidzo , zvinoreva kureva nekusimudza ruoko rwako muchiitiko chimwe kana chimwe kutamba / kumbomisa mimhanzi yako kana kudzima / kugonesa ANC. Sezvo ichi chiri chega patent panguva ino, zvinogona kana kusaona mwenje wekugadzira.
Kana iri nyaya yeMagSafe, hatizoshamiswa kana iyo nyowani AirPods Pro ichiratidza imwe fomu yeMagSafe rutsigiro. Apple yakatotumira patent nezve ramangwana rekushandisa kweMagSafe , pamwe maAirPod uye iPad. Iyo patent inoratidza iyo yakatetepa folio kumusana kweAirPods ichabvarurwa kuburikidza nemagineti uye inogona kuumba inotakurika, pa-iyo-iyo-yekuchaja mhinduro
AirPods Pro 2 hupenyu hwebhatiri
Hupenyu hwebheteri hweAirPods Pro hwazvino hwakatarwa mumaawa e4.5 ekutamba pamutero mumwe, iyo Samsung's Buds Pro yakarova nehafu yeawa. Nenyaya yacho, iyo AirPods Pro inogona kukwira kusvika maawa makumi maviri nemana.
Yazvino AirPods Pro isina waya yekuchaja kesi
Kana nyowani nyowani dzikauya, tichava nechokwadi chekuzvisanganisira pano, saka inzwa wakasununguka kuisa bookmark peji rino kana uchifarira Apple AirPods Pro 2.
Dzimwe AirPods uye Apple nhau
yakanakisa smartphone yemumhanzi 2015
Google Arts & Tsika app inogona kuenderana neselfies yako kune yakakurumbira mifananidzo
T-Mobile chinyararire yakawedzera nyika yayo ye5G network mune dzimwe nzvimbo nguva pfupi yadarika
Yakanakisa Apple iPhone SE skrini inodzivirira - yakagadziridzwa 2021
Apple inotanga kutengesa kweyakagadziridzwa iPhone 7 uye 7 Plus, pane yakapfava kwazvo mutengo
Akanakisa Kutenga macomputer Amazon Prime Day 2020 nemavambo eChishanu Chishanu madhiri
Sprint inopa iPhone 8 BOGO dhiri uye $ 300 kubva pa iPhone X nekutengesa-mukati